Kenya oo Sheegatay Dilka dagaal-yahanno ka tirsan Al-shabaab – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2015 2:26 b 0
Isniin, Oktoobar 26, 2015 (Daljir) —Ciidamada Kenya ayaa sheegtay in ay weerar ku qaaday deegaanka Yoontoy ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dishay 15 ka mid ah dagaalyahanada ururka Alshabaab ayna burburiyeen 2 doon.Afhayeenka ciidamada Kenya Col David Obonyo ayaa sheegay in subaxnimadii Axada ay weerar ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Alshabaab oo doonayay inay ka soo gudbaan wabiga Jubba.
“Labo doon oo ay doonayeen inay ugaga soo gudbaan wabiga Jubba waa la burburiyay mana jiro wax waxyeelo ah oo soo gaaray ciidamada Kenya,”ayuu yiri Obonyo.
Afhayeenka ayaa intaasi sii raaciyay in Yoontooy ay ahayd meel muhiim u ah ururka Alshababa oo uu ugaga soo gudbi jirey wabiga si uu gobolka Jubbada Hoose weeraro ugaga geysto.
Sida ay daabaceen Warbaahinta Kenya weerarkan ayuu ku macneeyay afhayeenka inuu yahay mid bilow u ah ka saarista ururka Alshabaab ee gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jilib.
Ma jiro ilo madax banaan oo xaqiijinaya ama beeniniya warkan ka soo yeeray dowlada Kenya,ururka Alshabaabna illaa iyo hadda kama hadlin weerarkan ay sheegteen ciidamada Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa soo galay gudaha dalka Soomaaliya Oktoobar 2011, kadib markii kooxo hubeysan ay ka soo duubteen gudaha dalka Kenya labo shaqaale oo u dhashay dalka Spain kuwaasoo u shaqeynayay hay’ada MSF ee xerada qaxootiga Dhadhaab.
Barlamaanka Puntland oo u Yeeray Madaxweyne Gaas